Ososayensi basungule insimbi enqabayo ukucwila - BGR - Tamban RELAY
Accueil » ISAYENSI Ososayensi basungule insimbi enqabayo ukucwila - BGR
Uma uzama ukwakha into engagelezi, ukuyenza ngensimbi kubukeka njengomqondo owesabekayo. Senza izikebhe zensimbi nemikhumbi ngoba iqinile futhi ihlala isikhathi eside, kepha inesisindo esiningi futhi, uma kunezinkinga, akukho lutho oluyivimbayo ukuthi ingashoni phansi.
Abaphenyi eYunivesithi yaseRochester ] beze nekhambi elingaba khona. Kuyinsimbi ezonda ngokuphelele amanzi, iyawucindezela ngokuqinile futhi idale amaphakethe omoya okuvumela ukuba uthule kuzo zonke izimo. Abasunguli bayo bakholelwa ukuthi lokhu kungashintsha umklamo wemikhumbi futhi kwakheke izikebhe ezingacabangi ngempela.
Imfihlo iphethini ekhethekile eqoshwe ebusweni bomuntu elingisa umoya futhi livimbele amanzi ukuthi angathinti futhi angahambi. Iqembu lithi le ndlela yokuhlunga ye- "superhydrophobic" yaphefumulelwa yimvelo yemvelo. Imizimba yezintuthwane zomlilo yi-hydrophobic kanti izicabucabu ezenza imishanguzo engaphansi kwamanzi zisebenzisa imizimba yazo ukudonsa umoya futhi ziyithuthe ngaphansi kobuso.
ophakamisa ukuthi kungenzeka ukuthi kusetshenziswe indawo e-SH ukudala imishini elintantayo ", chaza abaphenyi iphepha elisha lokucwaninga .
Ukukhombisa ukusebenza kwensimbi, abacwaningi baklama ukuhlolwa ngamadiski amabili ensimbi. Enye yediski yenziwa ngensimbi "ejwayelekile", kanti enye iyinto efanayo necebo lokufakelwa okhethekile elifakiwe. Njengoba ukwazi ukubona kuvidiyo, i-superhydrophobic iron disc iyenqaba ukucwila, noma iqhutshwa ijulile emanzini.
Mhlawumbe okubaluleke kakhulu ezimweni zokusetshenziswa kwangempela, insimbi igcina izindawo zayo ezingaphatheki kahle kwamanzi noma ilimele. Abaphenyi bajikijela izimbobo eziningana ku-disc, baveza ukuthi ibisantanta phezu komhlaba ngisho noma ubu ethembekile babungabikhona.
Lokhu kufakazela ukuthi insimbi efakwe ngale ndlela ingaba wusizo ekwakhiweni kwezikebhe nemikhumbi, ngokunokwenzeka ibanikeze izakhiwo zangempela "ezingacabangi" futhi ibavumele ukuba bahlale bemile uma kwenzeka bonakele.
Umthombo Wezithombe: Photo of the University of Rochester / J. Adam Fenster
I-Boeing iphakamisa i-lander ene-lunar ukuthi akunakwenzeka ukuthi ikwazi ukwakha ngesikhathi somkhosi wenyanga weNASA we-2024 - BGR